Ungawukhuphela njani umkhangeli omtsha kwi-samsung smart tv? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungawukhuphela njani umkhangeli omtsha kwi-samsung smart tv?
Inkqubo yeTV ngokwayo yinkqubo eyakhelwe-ngaphakathi kwi-Samsung App. apho ungatsho isikhangeli esahlukileyo. Ukusuka kuGoogle, umzekelo, uGoogle Chrome ulunge kakhulu kwaye uyakhawuleza.Kuhamba ngesantya soxhumano, icinezela iipakethi zedatha kakuhle kwaye umthwalo amaphepha ngokukhawuleza.
Ukukhuphela kunye nokufaka ibrowser entsha kwi-Samsung Smart TV yakho (Samsung Smart TV) kulula kakhulu. Ukwenza oku, kufuneka usebenzise inkonzo / umncedisi wekhowudi; Smart Hubquot; kwaye ungene kwivenkile yeapp ebizwa ngokuba yi-quot; Samsung App TVquot ;.
Ungangena kule nkqubo ngokucinezela iqhosha elikhethekileyo kulawulo olukude:
Ukungena kule venkile, ukhangela ibrawuza oyifunayo okanye ukhethe kweyokucetywayo kwaye ubeke kwiTV yakho entle.
Ke unokukhuphela kwaye ufake nayiphi na isicelo esivelweyo kwivenkile:
ewe, yintoni enye-ekhayeni enye; kwisiza
Ngaba azisekho ezinye iinkwenkwe ezinolwazi lokufunda nokubhala?
-Well, awunokwazi ukukhuphela isikhangeli esitsha kwiimodeli ezintsha ze-Samsung -Ngenye isikhangeli esinye kwaye sele kuyekile ukuxhasa ii-cinema ze-Intanethi- Yintoni engaqondakaliyo? Ukuseta kwakhona useto lwebrawuza nokukhubaza ukhuseleko lwengqondo nako akuncedi
Ukufaka isikhangeli esinjalo, kuya kufuneka uhambe ngokusebenzisa usetyenziso lweSmart Hub kwivenkile yokuhambisa izixhobo zeSamsung. Ivenkile inenombolo enkulu yokukhangela, unikwa ithuba lokuzibeka simahla kwaye zihlawulwe.
Kwizicelo kuphela yendlela entsha yokukhuphela ibrawuza, zinokubakho zombini iziphequluli ezikhululekileyo kwaye ezihlawulelwayo ziseti yemisebenzi. Ukukhuphela, ufuna ukufikelela kwinethiwekhi kwaye usebenzise ulawulo olukude ukufaka imenyu kwivenkile yesicelo.
Izikhangeli ze-Samsung smart tv inokukhuphelwa zombini zihlawulwe kwaye zisimahla. Ukukhuphela ibrawuza entsha, kufuneka usebenzise iiSoftware zeSamsung, esitolo sisebenzisa isicelo seTV. Ukwenza oku, yiya kwinkonzo ye-Smart Hub kwaye ufumane iiSoftware ze-Samsung apho, uze ukhethe isikhangeli kunye nokuyifaka.
Ukuba ufuna umkhangeli omtsha we-Samsung smart TV yakho, okokuqala kufuneka uye kwi-Smart Hub, kuba oku kuya kufuneka ufumane iqhosha elikude ngokubhaliweyo okunjalo okanye iqhosha elinemibala eyahlukeneyo, edla ngokubekwa kwindawo ekude kwaye ukhethe ii-Samsung Apps TV kwi-Smart Hub. Le ivenkile yesicelo kwaye apho kuya kufuneka ukhethe isikhangeli esifunayo ukuze usikhuphele kwiTV yakho.
Ungasifaka kwakhona isikhangeli sakho kwi-TV ngokusebenzisa i-smart hub application:
yiya ku-samsung Apps bookmark. Ngaphezulu ngezantsi nangaphezulu kweenkqubo ii-icon ziya kuvela. Okuphezulu okucetyiswayo. Ungayikhetha into kolu luhlu. Ezantsi sele ifakiwe. Kukho ukukhangela, isikhangeli esitsha singakhutshelwa kwaye sifakwe kuso.
Ukukhuphela ibrowser entsha kwi-Samsung Smart TV, kuya kufuneka ungene kwinkqubo eyakhelwe-kwi-TV ngokwayo ebizwa ngokuba yi-Samsung App TV -yivenkile yesicelo. Apha unokukhuphela nasiphi na isikhangeli kuluhlu olunikezelweyo. Nje ukuba ukhethe, cofa kwi-quot; okquot; kwi-kude yakho, unokufunda inkcazo yesikhangeli, ke ukuba yonke into ilingana nawe, zive ukhululekile ukucofa, & quot; downloadquot ;. Ungaqala isicelo ngesicatshulwa;
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,321.